Ny mariazy - Fihirana Katolika Malagasy
Fitohizan'ny hafatra : Ny mariazy
virginie2014 - 28/07/2014 13:49
Mila ny torohevitra avy aminareo za. Misy olona miaraka @ko dia manana fikasana ny hanao mariazy ze. Ny olona anefa dia izy protestant, za katolika ary samy tsy misy te ifindra fiangonana izahay. Ny RAD-ko tsy manaiky ny anaovana mariazy prostestant na ho mixte yan koa. Izy anefa tsy mety hanao mariazy katolika. Inona no ataoko? Za aloha mariako fa tsy hifindra protestant zany ary efa nekeny(olontiako) izany safidiko zany.
rakantofinaritra - 07/08/2014 08:27
Tena tsara raha manantona sy mila hevitra amin'ny P. curé-nareo ianao sy olon-tianao.
admin - 15/09/2014 13:58
Sarotra be ilay izy satria ny RAD-nao tsy manaiky hanaovana mariazy protestanta na mixte. Ilay fofombadinao tsy manaiky hanao mariazy katolika. Tsy misy azo atao fa mila mifandamina eo aloha ianareo hoe mandefitra ny iray.
Tsy voatery hifindra protestanta mihitsy aloha ianao, saingy toa tsy hisy fifandeferana izany eo aminareo ka asa na hanao ahoana.
rakotoarisonmilantozeze - 05/12/2014 15:37
Ity misy afatrakely amin'ny vehivavy fa tsiazo atao ny lehilahy no manaraka vehivavy amin'ny finoana protest ra ohatra ka katolika le ranga fa ny vehivavy foana no tokony manarak na inona na inona
lala6 - 08/04/2016 11:55
Azoko atao ve ny mitsivalana amin'izay safidin-janako raha tsy dia mety amiko?
Dominos - 24/02/2021 07:02
Salama tompoko, ahoana ihany no nataonareo roa kay?